ခရီးသွား – Myanmar Live
May 25, 2020 May 25, 2020 - by iampmy
ကိုဗစ်-၁၉ အကျပ်အတည်းကြောင့် အိမ်မှာ ၂ လနီးပါးနေပြီး ပျင်းရိနေကြရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ထိုင်းအစိုးရမှလည်း တားမြစ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေကို အနည်းငယ်ဖြေလျှော့ပေးလိုက်ပြီဖြစ်တာကြောင့် …
နခွန်ပထုမ်မြို့ဟာ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စေတီ နဲ့ ဘုရားပုထိုးတွေပေါများလှတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ် ဒါ့ကြောင့်လည်းဒီနေ့စာဖတ်ပရိသက်ကြီးရဲ့အားလပ်ရက်မှာ စိတ်နှလုံးကြည်လင်လန်းဆန်းပြီး ကောင်းမှု ကုသိုလ်လုပ်နိုင်ဖို့ရယ်ရည်ရွယ်ပြီး နခွန်ပထုမ်မြို့ရဲ့နာမည်ကြီးဘုန်းကြီးကျောင်း …
March 12, 2020 March 12, 2020 - by peeraporn y.
မိုလေသ၀အခြေအနေကစိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ် စနေ တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာအလည်ထွက် ဖို့စီစဉ်ထားတာလည်းရာသီဥတုဖောက်ပြန်လို့မသွားဖြစ်ပြန်ဘူး ဒါကြောင့် အရိပ်ထဲကလည်ပတ် စရာဖြစ်သလို ဗဟုသုတလည်းရ ရိုမန်းတစ်လည်းဖြစ်တဲ့ “နက္ခတာရာပြခန်း” …
မပြာင်းလဲတဲ့အချိန်နဲ့ အမြဲဂန္တ၀င်ဆန်တဲ့ ထာ့သီယန်
February 27, 2020 February 27, 2020 - by peeraporn y.
ထာ့သီယန် (ThaTian) ဆိုတဲ့ရပ်ကွက်လေးဟာ အယုဒ္ဒယခေတ်ကတည်းကရှိလာတာဖြစ်ပြီး ဈေးနဲ့ လှေဆိပ်ဟောင်းကိုတော့ ယနေ့အချိန်အထိ ပြုပြင်ထားသမျှကို ရှေးခေတ်အရသာကိုရရှိစေရန် ဂန္တ၀င်ဆန်န်ပြုပြင်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရမှာပါ …
ချင်းမိုင်ကို ၁ ရက်သွားလည်ရင်ဘယ်နေရာတွေသွားရမှာလဲ
ချင်းမိုင်ကို တစ်ရက်လောက်သွားလည်ကြည့်ပါလား ချင်းမိုင်မြို့ထဲမှာဆိုရင် သမိုင်းဝင်ဘုန်းကြီးကျောင်းများ အများအပြားရှိသလို အရမ်းကိုလှပတဲ့ ကဖီးဆိုင်လေးတွေလည်းတော်တော်များများရှိပါတယ် လှပတဲ့တောင်တန်းကြီး တွေနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်လည်း မရိုးနိုင်လောက်အောင်လှတာကြောင့် …
ပင်လယ်ချစ်သူတို့လက်မလွတ်သင့်တဲ့ Railay Beach
February 13, 2020 February 13, 2020 - by peeraporn y.
တောင်တက်အားကစားကိုနှစ်သက်သူတို့ မသွားမဖြစ်သွားသင့်ရဲ့ ဖီဖီကျွန်းက Railay Beach မြင့်မားတဲ့ကျောက်ကမ်းပါးရှိပြီး ကျောက်စိမ်းရောင်သန်းနေတဲ့ပင်လယ်ရေ၊ လှပတဲ့သဲသောင်ပြင်တို့ ဝန်းရံထားတဲ့ ကျွန်းအလည်ကကမ်းခြေလေးဟာ …
February 5, 2020 February 5, 2020 - by peeraporn y.
‘နောင်ပရဒုရထားဘူတာ’ ဟာသိပ်မကြီးလှပေမယ့် လမ်းဆုံဘူတာတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် သမိုင်းအရ နှင့် ယခုထိလည်း အရေးပါနေဆဲဖြစ်တဲ့ရထားဘူတာလေးတစ်ခုပါ။ ဘန်ကောက်ကနေ ကန်ကျနဘူရီ – …